Usebenza kanjani uNkulunkulu kumuntu? Ingabe uyakuqonda lokhu? Ingabe kucacile? Futhi kwenziwa kanjani ebandleni? Yini oyicabangayo? Ingabe uke wayicabangela le mibuzo? Yini ethemba ukuyifeza ngomsebenzi waKhe ebandleni? Ingabe konke kucacile manje? Uma kungenjalo, khona-ke konke lokho okwenzayo kuyize, akulutho futhi akusebenzi! Ingabe lawa mazwi ayayithinta inhliziyo yakho? Ingabe konke lokho okudingekayo ekufezeni isifiso sikaNkulunkulu kumane kuyintuthuko ezenzakalelayo, nengenambono ophambene kanye nohlehlayo? Ingabe kwanele ukubambisana okuyimpumputhe? Yini okufanele uyenze uma selokhu kunefu lokungabaza mayelana nombono? Ingabe kuhle yini ukungafuni? UNkulunkulu uthi, “Ngike ngenza umsebenzi omkhulu phakathi kwabantu, kodwa abazange babone, ngakho kwadingeka ngisebenzise izwi laMi ukuze ngiwembule kubo. Nokho, umuntu usalokhu engawaqondi amazwi aMi, futhi uhlala engazi lutho ngenhloso yecebo laMi.” Kusho ukuthini lokhu? Ingabe uke wayicabangela yini injongo yako? Ingabe uNkulunkulu umane enze ngokungaqondi nangokuphuthutheka? Futhi uma kunjalo, iyini injongo? Uma injongo ingacacile, futhi uma umuntu engaqondi, khona-ke kungabambisana kanjani ngempela? UNkulunkulu uthi okushisekelwa abantu kusezilwandle ezingenamingcele, kuphakathi kwamagama nezimfundiso ezingenalutho. Ngeke ngisho nize nazi ukuthi yimuphi umkhakha okuwela ngaphansi kwako enikushisekelayo. Yini uNkulunkulu afuna ukuyifeza kumuntu? Kufanele kukucacele konke lokhu. Ingabe kuwukuba kuphela ajabhise udrako omkhulu obomvu ngendlela enombono ophambene? Ingabe kungaba ukuthi ngemva kokujabhisa udrako omkhulu obomvu, uNkulunkulu uzomane aphile njengomuntu ohlala yedwa ongenalutho? Khona-ke kuyini lokho uNkulunkulu akufunayo? Ingabe ufuna ngempela izinhliziyo zabantu? Noma ukuphila kwabo? Noma umcebo kanye nezinto zabo? Lokhu kusiza ngani? Akunamsebenzi kuNkulunkulu. Ingabe uNkulunkulu wenze okuningi kangaka kumuntu ukuze akusebenzise njengobufakazi bokunqoba kwaKhe uSathane, kanye nokubonakalisa amandla aKhe? Ingabe lokhu ngeke kwenze uNkulunkulu abonakaleengabalulekile? Ingabe uNkulunkulu ngempela uwuhlobo olunjalo lukaNkulunkulu? Unjengengane edonsela abantu abadala empini? Kunakubaluleka kuni lokhu? Umuntu ngaso sonke isikhathi ubehlola uNkulunkulu ngemibono yakhe. UNkulunkulu wake wathi, “Umnyaka unezinkathi zonyaka ezine, futhi inkathi ngayinye inezinyanga ezithathu.” Umuntu walalela, futhi wakhumbula amazwi aKhe, futhi waqhubeka nokuthi kwakunezinyanga ezintathu enkathini ngayinye yonyaka kanye nezinkathi zonyaka ezine ngomnyaka owodwa. Khona-ke kwathi, lapho uNkulunkulu ebuza ethi, “Zingaki izinkathi zonyaka eziba ngomnyaka? Futhi inkathi ngayinye inezinyanga ezingaki?” Umuntu waphendula ngobunye, “Izinkathi zonyaka ezine, izinyanga ezintathu.” Umuntu ngaso sonke isikhathi uzama ukuchaza uNkulunkulu ngokwesekelwe emaqoqweni emithetho. Ezinsukwini zanamuhla enkathini “yezinkathi zonyaka ezintathu ngomnyaka owodwa, izinyanga ezine ngenkathi eyodwa yonyaka,” umuntu selokhu akazi, cishe uyimpumputhe, uzama ukubeka imithetho kuyo yonke into. Futhi manje umuntu uzama ukusebenzisa imithetho yakhe kuNkulunkulu! Uyimpumputhe ngempela! Akaboni yini ukuthi manje abukho “ubusika,” ukuthi kuphela “intwasahlobo, ihlobo, kanye nekwindla”? Umuntu uyisiphukuphuku ngempela! Esimweni samanje, umuntu usalokhu engayazi indlela yokwazi uNkulunkulu. Umane ufana nabantu bangama-1920, abacabanga ukuthi izinto zokuhamba azikho esimweni esikahle, ngakho bahamba ngezinyawo, noma bagibele imbongolo, noma abacabange ukuthi kufanele basebenzise izibani zamafutha, noma enye yezindlela ezindala zokuphila. Ingabe yonke lena akuyona yini imibono esezingqondweni zabantu? Ngakho kungani selokhu sikhuluma ngesihe kanye nothando namuhla? Lokhu kusiza ngani? Kunjengokuthemeleza kwesalukazi, esikhumbula inkathi yaso eyedlule, angasiza ngani lawa magama? Kakade, manje kumanje; ingabe iwashi lingabuyiselwa eminyakeni engama-20 noma engama-30 edlule? Abantu njalo balandela umsinga wolwandle; kungani kunzima kangaka ngabo ukwamukela lokho? Kule nkathi yamanje yokusolwa, zisiza ngani lezi zinkulumo zesihe kanye nothando? Njengokungathi konke kuNkulunkulu kuphelela esiheni kanye nasothandweni? Kungani kule nkathi “kafulawa kanye nalayisi,” abantu ngaso sonke isikhathi baphaka “amakhoba amabele kanye nemifino yasendle”?[a] UNkulunkulu akathandi, kodwa umuntu umcindezela ngamandla. Uma ubezokwenqaba, ubeyobhekwa “njengophikisana nohulumeni ophethe,” futhi nakuba kushiwo kaningi ukuthi uNkulunkulu ngokwemvelo wayengenaso isihe noma uthando, ubani obengalalela? Umuntu akanangqondo kakhulu. Kubonakala sengathi izwi likaNkulunkulu alisizi ngalutho. Njalo umuntu ubheka amazwi aMi ngendlela eyahlukile. Njalo abantu bayamphoqa uNkulunkulu, futhi kubonakala sengathi abantu abangenacala babhekana nezinsolo ezingenasisekelo; ubani ozokwenza ngokuvumelana noNkulunkulu? Njalo nifuna ukuphila esiheni nasothandweni lukaNkulunkulu, ngakho yini engenziwa? UNkulunkulu kufanele ezwe ukwethukwa umuntu; nokho, ngethemba ukuthi niyakwazi ukubona ukuthi uMoya oNgcwele usebenza kanjani ngaphambi kokuqagulisana noNkulunkulu. Noma kunjalo, ngiyaninxusa ukuba niqonde injongo yokuqala yezwi likaNkulunkulu. Ungazicabangeli wena njengohlakaniphile, bese ucabanga ukuthi izwi likaNkulunkulu liqukethe ukungcola. Lokhu akudingeki! Ubani ongasho ukuthi kungakanani “ukungcola” okusezwini likaNkulunkulu? Ngaphandle kokuthi uNkulunkulu asho lokho ngokuqondile, noma abonise lokho ngokucacile. Akufanele uzicabangele wena kakhulu. Uma ukwazi ukubona indlela yokwenza okusemazwini aKhe, khona-ke uhlangabezana nezimfuneko. Yini enye ofuna ukuyibona? UNkulunkulu uthe “Angisenaso isihe ngobuthakathaka bomuntu.” Ngisho nala mazwi acacile, nalula akanakuchazwa, pho kubaluleke ngani ukuqhubeka nokufuna, kanye nokucwaninga? Ngaphandle kokuba ngisho nolwazi lwemishini oluyisisekelo, umuntu angakwazi kanjani ukwakha irokhethi? Ingabe lokhu akungoba umuntu emane ethanda ukuziqhayisa? Umuntu akafaneleki ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu; kuphela ukuthi uNkulunkulu uyamphakamisa. Akazi ukuthi yini Yena ayithandayo, yini Yena ayizondayo, futhi umane ukhonza Yena. Ingabe lokhu ngeke kube yingozi? Abantu abaziqondi bona, kodwa bacabanga ukuthi bayamangalisa. Bacabanga ukuthi bangobani! Bayizimpumputhe ngempela ngokomehluko phakathi kobuhle nobubi. Cabanga ngesikhathi esidlule, bese ubheka phambili esikhathini esizayo. Yini oyicabangayo? Khona-ke zazi wena.
UNkulunkulu wembule okuningi ngenhloso nangenjongo yomuntu. UNkulunkulu uthe, “Kwakungalesi sikhathi lapho ngabona khona inhloso kanye nenjongo yomuntu. Ngabubula ngigcwele izinyembezi: Kungani umuntu ngaso sonke isikhathi enza izinto ezithokozisa yena? Ukusolwa yiMi akwenzelwanga yini ukumenza aphelele? Ingabe ngezama ukumdumaza?” Ufundani ngawe kula mazwi? Ingabe inhloso nenjongo yomuntu ihambe ngempela? Ingabe uke wahlola? Kungcono nimane nize phambi kukaNkulunkulu futhi nizofunda, ukuthi yini efezwa umsebenzi waKhe wokusola kini? Ingabe niye nakufingqa? Mhlawumbe anizange, noma kungenzeka ukuthi esikhathini eside esedlule niye nazitika ngokweqisa. Yini uNkulunkulu acela ukuba nifinyelele kuyo? Emazwini akhulunywe kini, angakanani eniye nawenza? Kungakanani okushiwo kwaba yize? Emehlweni kaNkulunkulu, mancane amazwi aKhe aye enziwa ngempela; lokhu kungenxa yokuthi umuntu angeke akwazi ukuchaza injongo yaKhe yokuqala, futhi umane emukele noma yini emkhumbuza okwedlule. Ngale ndlela ingabe angawazi na umqondo kaNkulunkulu? Maduze, uNkulunkulu uzoba nomsebenzi omningi womuntu; ingabe umuntu uzowufeza yini lowo msebenzi ngesiqu esingokomoya esincane umuntu anaso manje? Uma kungelona iphutha, umuntu akanangqondo, noma mhlawumbe uyaqhosha, ukuba njalo kuyimvelo yabantu. Empeleni kuyinto engacabangeki: Ngakho konke lokho uNkulunkulu akushilo, kungani umuntu angakuthathi ngenhliziyo? Ingabe kuwukuthi izwi likaNkulunkulu limane liwumdlalo, alenzelwanga ukuthi libe nanoma yiliphi ithonya? Ukuze kumane kubonakale umuntu edlala idrama “Yenjabulo, Intukuthelo, Ukudabuka noKuthokoza”? Ukwenza umuntu ajabule okwesikhashana, bese kamuva ekhala, ngemuva kwalokho enze ngokubona kwakhe engekho esiteji? Yiliphi ithonya lokhu okungaba nalo? “Kungani izibopho zaMi kumuntu njalo ziba yize? Ingabe kunjengokungathi bengicela inja ukuba igibele esihlahleni? Ingabe ngezama ukubanga inkathazo ngeze?” Amazwi uNkulunkulu awakhulumayo aqondiswe esimweni esingokoqobo somuntu. Kungenzeka omunye azihlole, futhi abone ukuthi ubani ophila ngokuhambisana nezwi likaNkulunkulu. “Futhi ngisho namanje, izindawo eziningi ziyaqhubeka nokushintsha. Uma ngelinye ilanga umhlaba ungashintsha ngempela ube ngolunye uhlobo, ngizowuchitha ngokushesha—ingabe leso akusona yini isigaba engikuso manje emsebenzini waMi?” Empeleni, uNkulunkulu manje wenza lo msebenzi; nokho, lapho uNkulunkulu ethi “ngizowuchitha ngokushesha,” lokhu kubhekise esikhathini esizayo, njengoba yonke into iyinqubo eqhubekayo. Ingabe uyakubona lokhu kwabaningi emsebenzini kaNkulunkulu wamanje? Ngenxa yesici enhlosweni yomuntu, imimoya engcolile ithola ithuba lokubonakala. Ngalesi sikhathi, “umhlaba ushintsha ube ngolunye uhlobo” futhi abantu ngaleso sikhathi bazoshintsha ngokwezinga, kodwa ubuntu babo buzohlala bunjalo. Lokhu kungenxa yokuthi kunokunye kokuthuthukiswa emhlabeni. Ngamanye amazwi, umhlaba wokuqala wawumncinyane, futhi emva kokuba usuthuthukisiwe ungase usetshenziswe. Nokho, emva kokusetshenziswa isikhathi esithile, futhi ungasenakho ukusetshenziswa, uzobuyela kancane kancane esimweni sawo sokuqala. Lesi yisifingqo sesinyathelo esilandelayo emsebenzini kaNkulunkulu. Umsebenzi kaNkulunkulu esikhathini esizayo uzoba yinkimbinkimbi kakhulu, ngenxa yokuthi yisikhathi sokwahlukanisa izinhlobo zabantu ezahlukahlukene. Endaweni yokuhlangana ekugcineni, kuzoba nesibhicongo sokudideka, futhi umuntu ngeke abe nombono oqinisekileyo. Njengoba nje uNkulunkulu athi: “Bonke abantu bangabadlali abahamba neningi.” Njengoba nje abantu benekhono lokwenza ngokuvumelana neningi, uNkulunkulu usebenzisa lesi sici esinyathelweni esilandelayo somsebenzi waKhe, ukuze enze wonke umuntu alungise le nkinga. Abantu bathonyeka kalula ngenxa yokuthi abanaso isiqu esingokomoya sangempela. Ukube bebenaso, bebengaba yimithi emikhulu. UNkulunkulu uhlose ukusebenzisa ingxenye yomsebenzi wemimoya emibi ukuphelelisa ingxenye yomuntu, ukuze laba bantu bakwazi ukubona ngokuphelele imisebenzi yamadimoni, futhi avumele wonke umuntu ukuba abaqonde ngempela okhokho bakhe. Kungaleso sikhathi kuphela lapho abantu bengakhululeka khona ngokuphelele, bengayeki kuphela inzalo yamadimoni, kodwa ikakhulu okhokho babo. Lena yinhloso yokuqala kaNkulunkulu yokunqoba ngokuphelele udrako omkhulu obumvu, ukwenza ukuthi umuntu wonke asazi isimo sangempela sikadrako omkhulu obumvu, ukususa ngokuphelele isifihla-buso sakhe, nokuthi kubonakale isimo sakhe sangempela. Yilokhu uNkulunkulu afuna ukukufeza, futhi kungumgomo waKhe wokugcina emhlabeni awenzele umsebenzi omningi kangaka; uhlose ukufeza lokhu kuwo wonke umuntu. Lokhu kubizwa ngokuthi ukuqondisa izinto zonke ngenjongo kaNkulunkulu.
Niyacacelwa yini ukuthi uzokwenziwa kanjani umsebenzi wesikhathi esizayo? Konke lokhu kufanele kuqondakale. Ngokwesibonelo: Kungani uNkulunkulu ethi abantu abakayenzi imisebenzi yabo? Kungani ethi abantu abaningi behlulekile ukuqedela umsebenzi wasekhaya abashiyele wona? Lezi zinto zingafezwa kanjani? Ingabe uke wayicabangela le mibuzo? Ingabe lokhu kube yizihloko zengxoxo yakho? Ngalesi sigaba somsebenzi, umuntu kufanele aqonde izinhloso zamanje zikaNkulunkulu. Lapho lokho sekufeziwe, kungaxoxwa ngezinye, akunjalo? Lokho uNkulunkulu athemba ukukufeza kumuntu kudinga ukuchazwa ngokucacile, ngaphandle kwalokho akusizi ngalutho. Ngeke bakwazi ukungena kukho, futhi kungenzeka nokuthi bangakwazi ukukufeza; akuxazululeki. Ingabe uyitholile indlela yokwenza lokho uNkulunkulu akusho manje? Abantu babheka izwi likaNkulunkulu ngokwesaba. Abaliqondi, futhi besaba ukuthukuthelisa uNkulunkulu. Zingaki izindlela zokudla nokuphuza esezishiwo kumanje abazitholile? Abaningi abazi ukuthi kudliwa futhi kuphuzwe kanjani; lokhu kungaxazululwa kanjani? Ingabe uyitholile indlela yokwenza lokhu ezwini lanamuhla? Uzame ngayiphi indlela ukuzibandakanya? Futhi lapho nonke seniwangenisile amazwi, yiziphi izindlela oxoxa ngazo ngemizwa yakho? Akufanele yini umuntu akwenze lokhu? Kufanele uwugunyaze kanjani umuthi ofanele? Ingabe usadinga izwi likaNkulunkulu ngokuqondile? Ingabe yilokhu okudingekayo? Zingaqedwa kanjani ngokuphelele lezi zinkinga? Mane ubone nje ukuthi uyakwazi ngempela yini ukubambisana noMoya oNgcwele ngesenzo. Uma kunokubambisana okufanele, uMoya oNgcwele uzokwenza umsebenzi omkhulu. Uma kungekho ukubambisana okufanele kodwa kunalokho kukhona ukudideka, uMoya oNgcwele ngeke asize. “Uma usazi isitha sakho futhi uzazi nawe, uyonqoba njalo.” Kungakhathaleki ukuthi ubani owakhuluma lawa mazwi ekuqaleni, afaneleka kakhulu kini. Ngamafuphi, kufanele niqale ngokuzazi nina ngaphambi kokuba nazi ngesitha senu, futhi ekugcineni nizokwazi ukunqoba yonke impi. Nonke kufanele nikwazi ukwenza lokhu. Noma yini uNkulunkulu akucela yona, kudingeka uyenze ngamandla akho onke. Ngethemba ukuthi uzokwazi ukubonisa ubuqotho bakho kuNkulunkulu phambi kwaKhe ekugcineni, futhi uma nje uzobona ubuso obujabulisayo bukaNkulunkulu esihlalweni saKhe sobukhosi, ngisho noma kuyisikhathi sokufa kwakho, kufanele ukwazi ukuhleka futhi umamatheke njengoba amehlo akho evaleka. Kufanele wenze umsebenzi wakho wokugcina kaNkulunkulu ngesikhathi sakho emhlabeni. Esikhathini esedlule, uPetru wabethelwa walenga ngenxa kaNkulunkulu; nokho, kufanele wanelise uNkulunkulu ekugcineni, futhi usebenzise onke amandla akho kuNkulunkulu. Yini isidalwa esingayenzela uNkulunkulu? Ngakho kufanele uzinikele esiheni sikaNkulunkulu ungakashiywa yisikhathi kakhulu. Uma nje uNkulunkulu ejabula, khona-ke makenze noma yini ayifunayo. Yiliphi ilungelo abantu abanalo lokukhononda?
a. Amakhoba amabele nemifino yasendle ukudla okwakudliwa ngabantu abahluphekayo kudala.